Manaiky ny Hisian’ny Fahalalahana Ara-pivavahana i Kirghizistan
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Zoloa Éwé
2 MARTSA 2015
Tsy mifanaraka amin’ny lalàm-panorenana ny ampahany amin’ilay Lalàna Momba ny Fivavahana navoaka tamin’ny 2008. Izany no didy navoakan’ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana ao Amin’ny Fitsarana Tampon’i Kirghizistan, tamin’ny 4 Septambra 2014. Azo natao àry ny nanoratra ho ara-dalàna ny Fikambanan’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny faritra atsimon’i Kirghizistan. *
Na dia efa nivoaka aza ilay didy, dia mbola tsy eken’ny Komity Misahana ny Raharaha Ara-pivavahana ny hanoratana ny Vavolombelona ho ara-dalàna any amin’ny faritra atsimon’i Kirghizistan. Raha tsy manao fanovana amin’ilay lalàna tamin’ny 2008, hono, ny antenimiera dia mbola manan-kery io lalàna io ka tsy afaka ny ho voasoratra ara-dalàna ny Vavolombelon’i Jehovah. Mbola voarara àry ny asan’ny Vavolombelona any amin’ny faritra atsimon’i Kirghizistan nefa voasoratra ara-dalàna sy mizotra tsara ny any amin’ny faritra avaratra. *
Voasambotra noho ny asa ara-pivavahana
Mipetraka any Naryn, tanàna iray any amin’ny faritra atsimoatsinanan’i Kirghizistan, ny vehivavy iray atao hoe Zhyldyz Zhumalieva ary 46 taona izy. Niresaka ny zavatra inoany tamin’ny olona izy, tamin’ny 30 Jona 2014. Nosamborin’ny manam-pahefana izy ary nomelohina, satria hoe niresaka ny zavatra inoany tamin’ny olona, nefa ny fivavahana misy azy tsy voasoratra ara-dalàna. * Sambany, taorian’ny fahaleovan-tenan’i Kirghizistan, vao nisy Vavolombelona nomelohina satria niresaka ny zavatra inoany.
Nampakatra fitsarana tany amin’ny Fitsaram-paritr’i Naryn i Zhumalieva, ary natao tamin’ny 5 Aogositra 2014 ilay fitsarana. Nametraka fanontaniana maro be ireo mpitsara tao, satria te hahalala momba ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny hafatra toriny. Rehefa nodinihin’ireo mpitsara ny porofo rehetra dia naaton’izy ireo ilay fitsarana. Niandry an’ilay didy navoakan’ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana izy ireo.
Nandinika an’ilay raharaha momba an’i Zhumalieva ilay Fitsaram-paritr’i Naryn, tatỳ aoriana. Nilaza ireo mpitsara tao fa tsy nandika lalàna mihitsy i Zhumalieva. Hitan’izy ireo koa fa manan-jo hiresaka ny zavatra inoany amin’ny hafa ny mpivavaka rehetra, araka ny lalàm-panorenana. Voamarik’izy ireo avy tamin’ilay didy navoakan’ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana fa voasoratra ara-dalàna ny Vavolombelon’i Jehovah manerana an’i Kirghizistan. Nanafoana ny fanamelohana an’i Zhumalieva tany amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany koa izy io. Nampakatra an’ilay raharaha tany amin’ny Fitsarana Tampony ny mpampanoa lalàna, satria hoe tsy misy ifandraisany amin’ny heloka nataon’i Zhumalieva, hono, ilay didy navoakan’ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana. Nolavin’ny Fitsarana Tampony anefa izany tamin’ny 24 Desambra 2014. Ny fanapahan-kevitry ny Fitsaram-paritr’i Naryn àry no mbola manan-kery. Noho izany dia afaka madiodio i Zhumalieva ary mahazo miresaka ny zavatra inoany amin’ny hafa.
Nahazo rariny ny Vavolombelon’i Jehovah tany Osh, na teo aza ny fanendrikendrehana
Nambenana tao amin’ny trano iray i Oksana Koriakina sy Nadezhda Sergienko reniny, tamin’ny 2013. Voaendrikendrika ho nanao heloka bevava mantsy izy ireo rehefa niresaka ny zavatra inoany tamin’ny hafa. Nanararaotra an’izany koa ny manam-pahefana tao Osh, mba hiampangana ny Vavolombelon’i Jehovah hoe manao “asa ara-pivavahana tsy ara-dalàna.” Nilaza ny manam-pahefana fa tsy tokony hiresaka ny zavatra inoany ny Vavolombelona raha tsy voasoratra ho anisan’ny fivavahana ara-dalàna eo an-toerana.
Nafahan’ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Osh izy mianaka. Nilaza ilay mpitsara tamin’ny didy navoakany, tamin’ny 7 Oktobra 2014, fa tsy nety mihitsy ny famotorana nataon’ny manam-pahefana. Nampangain’izy ireo koa i Koriakina sy Sergienko satria fotsiny hoe Vavolombelon’i Jehovah.
Nangataka ny hanafoanana ny fanapahan-kevitr’ilay mpitsara ny mpampanoa lalàna tao Osh. Nangataka izy hoe haverina indray ilay famotorana mba ho afaka “hanitsy” ny zavatra tsy nety nataony ireo manam-pahefana. Ho azo averina koa ny fitsarana azy mianaka amin’izay. Rehefa nolavin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ny fangatahany, dia nampakatra tany amin’ny Fitsarana Tampony izy. Ny 3 Martsa 2015 no fotoana nomen’io fitsarana io hihainoana an’ilay raharaha, ary manantena ny Vavolombelona fa ho ara-drariny ny didy avoakan’io fitsarana io.
Hanaiky ny hisian’ny fahalalahana ara-pivavahana ve i Kirghizistan?
Hoy ny Vavolombelon’i Jehovah iray nanatrika ny fitsarana an’i Zhumalieva: “Nanenjika anay foana ny manam-pahefana teto an-toerana nanomboka tamin’ny 1998, satria tsy voasoratra ara-dalàna izahay eto Naryn. Mino àry izahay fa ho voasoratra ara-dalàna amin’izay, taorian’ireny didy navoakan’ny Fitsarana Tampony ireny.”
Manantena ny Vavolombelon’i Jehovah fa ho voasoratra ara-dalàna izy ireo ao Naryn sy Osh ary any amin’ny tanàna hafa any amin’ny faritra atsimon’i Kirghizistan. Amin’izay izy ireo mba afaka manompo an’Andriamanitra ary tsy hisy hanakorontana. Hisy ny fahalalahana ara-pivavahana any Kirghizistan, raha manaraka ny didy navoakan’ny Fitsarana Tampony io firenena io.
^ feh. 2 Jereo ilay lahatsoratra hoe: “Manome Fahalalahana ho An’ny Vavolombelon’i Jehovah ny Fitsarana Tampon’i Kirghizistan”, mba hahitanao an’ilay fanapahan-kevitry ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana ao Amin’ny Fitsarana Tampony, tamin’ny 4 Septambra 2014.
^ feh. 3 Voasoratra ara-dalàna ny Vavolombelona eran’i Kirghizistan sy any amin’ny faritra avaratr’io firenena io. Efa imbetsaka anefa ny manam-pahefana any amin’ny faritra atsimo no tsy manaiky hoe hosoratana ho ara-dalàna ny Vavolombelon’i Jehovah any an-toerana.
^ feh. 5 Milaza ny andininy 395(2) ao amin’ny Fehezan-dalàna Fitantanana any Kirghizistan fa tsy azo atao ny mandika an’ilay “didy momba ny fikarakarana sy fanatrehana fivoriana ara-pivavahana, filaharana eny amin’ny arabe, ary ny fombafomba ara-pivavahana hafa.”